सुदूरप्रदेशमा संक्रमित बढेकाले रोकथाम र निगरानीमा चुनौती थपिएको छ : मुख्यमन्त्री भट्ट – Nepal Japan
नेपाल जापान २४ चैत्र २१:३७
नेपालमा पुष्टि भएका कोभिड–१९ का नौ संक्रमितमध्ये चार सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् । शनिबार एकसाथ सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका दुई पुरुष र एक महिलामा कोरोना भएको पुष्टि भएपछि रोगको रोकथाम र निगरानीमा चुनौती थपिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमित बढ्दै गइरहेका बेला कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले केकस्ता रणनीति अपनाएको छ, तयारी कस्तो छ भन्नेलगायत समसामायिक विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग राससका लागि रासस सुदूरपश्चिम प्रदेशप्रमुख सिद्धराज भट्ट र प्रकाश मिश्रले आइतबार गरेको कुराकानीका अंशः
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसारको तयारी गरिरहेको छ । यो भनेको क्वारेन्टाइन बनाउने र त्यहाँ मानिसलाई राख्ने, जाँच गर्ने कुरा हुन् । संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउने कुरामा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । त्यसका साथै हामीले प्रदेशमा उपलब्ध नौ वटै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने तयारी थालेका छौं। हामीले अब थप पन्ध्र वटा भेन्टिलेटर स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं। जनतामा विश्वास कायम रहिरहने गरी हामी काम गरिरहेका छौं ।
हामीले भारतबाट आउनेहरुलाई सिमानामा प्रारम्भिक जाँचपछि मात्र प्रवेश दिएको र उनीहरुको तथ्याङ्क राखेको अवस्था हो । यहाँबाट प्रारम्भिक जाँच भइसकेपछि उनीहरु कहाँ गए, के गरिरहेका छन् भन्ने सूचना र जानकारी स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
कोरोनाको रोकथाम र निगरानीका लागि प्रदेशमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था के छ ? निजी मेडिकलहरुसंग समन्वय कत्तिको गर्नुभएको छ ? सामान्य बिरामी भएको व्यक्तिले पनि यति बेला सहज रुपमा उपचार नपाएको भन्ने गुनासो आउन थालेको छ नि ?
हामीले निजी मेडिकलहरुलाई भनिसकेका छौं, कुनै पनि जनताले औषधि उपचार पाएनौं भनेर आउने स्थिति नदेखियोस् । यदि त्यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने हामी कडा कारवाही गर्न बाध्य हुनेछौं। निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले पनि यस संकटको बेला स्वास्थ्य सेवा दिने काममा पछि नहट्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।
हामीसँग केही दिनका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री छन् तर पर्याप्त छैनन् । यो संकट निश्चित भूगोल र देशमा मात्र निम्तिएको होइन । तसर्थ सचेत हुँदै प्रदेश सरकार लागिरहेको छ । अहिले हामीसँग सामान्यरुपमा आवश्यक पर्ने ह्याण्ड स्यानिटाइजर, पिपिई ,सर्जिकल मास्क लगायतका अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्तता धेरै छैन तर हुँदै नभएको पनि हैन ।
यदि कसैले महामारीको बेला कालोबजारी गरेको पाइए प्रचलित कानूनअनुसार हदैसम्मको कारवाही हामी गर्नेछौं। यसका लागि हामीले अनुगमन टिम पनि बनाएका छौं । अनुगमनका क्रममा कालोबजारी गरेको पाइएमा वा उपभोक्ताको गुनासो आए हामी सम्बन्धितलाई कारवाही गर्ने छौं ।
हेर्नुस्, मानिसहरु सामान्य समय जस्तै जसरी राहत वितरण गर्ने तस्वीर लिने अनि प्रचार गर्ने काममा लागेका छन् । यसो गर्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना निकै बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले आइतबारदेखि अव्यवस्थित रुपमा विभिन्न नाममा वितरण गरिँदै आएका राहत वितरणमा रोक लगाएका छौं । मानिसहरुले संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुप¥यो । यदि कसैलाई सहयोग गर्ने इच्छा चाहना भए देशमा तीन तहका सरकार छन् । कुनै पनि सरकारसँग समन्वय गरेर वितरण गर्न सकिने छ । हैन भने कुनै सामाजिक दूरी कायम नगरी भीडभाड गरेर राहत वितरण गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तो हैन । हामीले धनगढीमा खासगरी दुवईबाट आएका व्यक्तिलाई संक्रमण देखिसकेपछि उहाँहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाइ ट्रयाकिङ गरेका छौँ । हामी यस विषयमा गम्भीर नै छौं । हामीले तेस्रो मुलुक मात्र हैन भारतबाट आएकालाई समेत ट्रयाकिङ गरेका छौँ । सरकारले केही गरेन, सरकार हरायो भन्नु भनेको विरोधका लागि विरोध मात्र हो । विरोध गर्नेहरु गरिहन्छन्, हामी आफ्नो काममा लागिरहन्छौं ।